Sat, May 30, 2020 at 4:19am
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीद्वारा कञ्चनपुरमा अनुगमन
कञ्चनपुर, २० मंसिर । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको राष्ट्रिय मानव अधिकारको निर्वाचन पर्यवेक्षक टोलीले आज कञ्चनपुरमा अनुगमन गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठक, आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक दीपकजंग ध्वज कार्की, आयोगका अनुसन्धन प्रमुख राजेन्द्र न्यौपाने र जिल्ला पर्यवेक्षक उमा जोशीलगायतको टोलीले अनुगमन गरेको हो । निर्वाचन पूर्व जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, हालको सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचन आचारसंहिता परिपालना भए नभएको विषयमा..
दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामा भोलि गाडी नचल्ने, सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं, मंसिर २० । निर्वाचन आयोगले बिहीबार हुने चुनावको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ । बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म सबै मतदान केन्द्र बनाइसक्ने आयोगले जनाएको छ । बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान गर्न सकिन्छ । आयोगले चुनावको तयारीबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउँदैछ । दिउँसो साढे २ बजे चुनावको सबै तयारीबारे जानकारी गराइने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी..
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि जापानी उपविदेशमन्त्री आज नेपाल आउदै
काठमाडौं मंसिर २० । भोली हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधी सभा सदस्यको दोस्रो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षको लागि जापानका उपविदेशमन्त्री इवाओ होरी आज काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । उपविदेशमन्त्री होरी ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आज काठमाडौं आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उपविदेशमन्त्री होरीले राष्टपति विद्यादेवि भण्डारी, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधि प्रसाद यादव, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन लाई..
काठमाडौँका दशवटै निर्वाचन क्षेत्रको तयारी पूरा, मतगणना दुई ठाउँमा
काठमाडौँ, २० मंसिर । सबैभन्दा धेरै मतदान निर्वाचन क्षेत्र र मतदाता भएको काठमाडौँ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का मुख्य अधिृकत रमेशराज पोखरेलका अनुसार काठमाडौँमा १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानका लागि तयारी पूरा भएको हो । काठमाडौँको १० वटै निर्वाचन क्षेत्रको संयोजनसमेत गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पोखरेलले भने, “दश वटै निर्वाचन क्षेत्रमा..
विराटनगरमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राखिएका सामग्री हटाइयो
विराटनगर, २० मंसिर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले मङ्गलबार साँझसम्ममा विराटनगरबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सय किलोभन्दा बढी सामग्री हटाएको छ । सडकको दायाँबायाँ झुण्ड्याइएको अवस्थामा राखिएका त्यस्ता सामग्री विराटनगरको मुख्य बजारदेखि पुष्पलाल चौकसम्म, कञ्चनबारीक्षेत्र र विराटनगर–५ को कोचाखाल क्षेत्रबाट हटाइएको हो । भोलि बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित पार्नका लागि राखिएका त्यस्ता आचारसंहिता विपरीत सामग्री जिल्लाका अन्य ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी..
यस वर्षको राष्ट्रिय सम्पदा मानव अधिकार पुरस्कार खगराज आचार्यलाई
पोखरा, २० मंसिर । यस वर्षको राष्ट्रिय सम्पदा मानव अधिकार पुरस्कार अधिकारकर्मी खगराज आचार्यलाई दिइने भएको छ । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिद्वारा सञ्चालित तथा नागरिक समाजका संयोजक रामबहादुर पौडेलबाट स्थापित सो पुरस्कारको राशि रु १० हजार र ताम्रपत्र रहेको छ । अधिवक्ता तिलक पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सात सदस्यीय पुरस्कार छनोट समितिको सिफारिसमा आचार्यलाई सो पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको संस्थाकी..
म्याग्दी, मंसिर २० । म्याग्दीमा रहेका तामा र फलाम खानी उपभोग र संरक्षणको अभावमा पुरिन थालेका छन् । लुलाङ र रुमको ढुंगा खानीबाहेक अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिकाका ताकम, गुर्जा, कुइने, ओखरबोट लगायतका ठाउँमा रहेका खानी पुरिन थालेका हुन् । खानीबाट धातु निकालिने धाउ पुरिएका छन् । छन्त्याल जातिले पहाडभित्र सुरुङ खनेर त्यहाँ रहेको धातु निकाल्ने गर्दथे । छन्त्याल जातिमा धातु भएको ठाउँ..
प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम चार दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी
काठमाडौं, मंसिर १९ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम चार दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने दाबी गरेको छ ।आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सबै ठाउँको अन्तिम परिणाम चार दिनभित्र आइसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरेको हो । निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालले समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम ८ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । सकेसम्म एकैसाथ तीनवटै मतपत्रको गणना गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको तर त्यसो हुन नसके..
यसरी बन्नेछ नेपालको प्रदेशसभा, कुल ५ सय ५० जना सदस्य
मंसिर १९, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमंसिर २१ गते हुँदै छ । यसअघि मंसिर १० गते पहिलो चरण अन्तर्गत विभिन्न ३२ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन ४५ जिल्लामा हुँदै छ । पहिलो चरण र दोस्रो चरणको मतगणना भने एकैपटक थालिने छ ।मतगणना मंसिर २१ गते साँझबाट शुरु गरिने छ । संविधानको आधारमा निर्माण भएको प्रदेशसभा..
माओवादी नेता लेखराज भट्टको घरनजिकै बम बिस्फोट
काठमाडौ १९ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार लेखराज भट्टको घर नजिकै आज बिहान बम विस्फोट भएको छ । गोदावरी नगरपालिका १ अत्तरिया स्थित भट्टको घर अगाडी आज बिहान करिब ५ बजे अज्ञात समुहले बम बिस्फोट गराएको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोटबाट कुनै क्षति भने भएको छैन । माओवादी केन्द्रका ७ नम्बर प्रदेश..
सप्तरीमा अधिकांश मतदानस्थल संबेदनशील, सुरक्षा सतर्कतामा वृद्धि
सप्तरी, १९ मंसिर । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको यही मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । मतदान केन्द्र तथा मतदाता र नेता तथा कार्यकर्ताको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ । जिल्लाका सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतसहित कर्मचारी सुरक्षा निकाय र मतदानको सामग्री पुगिसकेको सप्तरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिश्चन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । मुख्य निर्वाचन कार्यालयका अनुसार चार..
चितवन, १९ मंसिर । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातेको अभियोग लागेकालाई मतगणनामा समावेश नगराइने भएको छ । मतपत्र च्यातेको अभियोगमा माओवादी केन्द्र निकट मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटीविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरु जनही रु एक–एक लाख धरौटीमा छुटेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखा कार्यालयमा आज आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र पत्रकारबीचको छलफलमा मुख्य..
कास्कीमा मतदाता परिचयपत्र वितरण शुरु, मतदानस्थल तयार गरिँदै
पोखरा, १९ मंसिर । निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीले मतदान केन्द्रबाट आजदेखि मतदाता परिचय वितरण शुरु गरेका छन् । परिचय वितरण बुधबार पनि जारी रहनेछ । कास्की जिल्लाका ३१७ वटै मतदान केन्द्रमा सोमबार नै मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगिसकेको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकले मत बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षाबारेमा पनि..
मतदानस्थलमा पनि मत हाल्ने तरिका सिकाइन्छ : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ, १९ मंसिर । के तपाई निर्वाचनमा मत हाल्ने तरिकाबारे स्पष्ट हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने चिन्ता नगर्नुुस्, तपाईलाई मतदानस्थलमा पनि मत संकेत गर्ने तरिका सिकाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि पर्याप्त समय नहुँदा र दुई तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न परेकाले कतिपय मतदातामा मतदान विधिबारे भएका अन्योल मेट्न निर्वाचन आयोगले मतदानस्थल र मतदानकेन्द्रमा मतदाता परिचयपत्र लिन..
उच्च हिमाली क्षेत्रम हिमपातको संभावना सर्तक रहन आग्रह
मंसिर १९, काठमाडौँ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमापातको संभावना रहेको भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हिमाली भेगका स्थानीय बासिन्दा तथा पर्वतारोहीलाई सर्तक रहन अपिल गरेको छ । महाशाखाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दालाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । महाशाखाका अनुसार दक्षिणपूर्वी अरब सागरमा देखापरेको चक्रवातको प्रभावले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुनसक्ने बलियो संभावना देखिएको हो । चक्रवातले जलवाष्फयुक्त..
बेनी नगरपालिका साक्षर घोषित, नगरपालिकाका ९६.८२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
म्याग्दी, १९ मंसिर । बेनी नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संयोजन र नगरपालिका कार्यालयले सदरमुकामस्थित बेनी सामुदायिक मावि परिसरमा सोमबार आयोजना गरेको समारोहमा साक्षर घोषणा गरिएको हो । नगरपालिकाका ९६.८२ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको बताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिकले अंक र अक्षर लेखपढ गर्न सक्ने भएपछि साक्षर वडा, स्थानीय तह..
कैलाली, १९ मंसिर । सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले चुनावलगत्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कैलालीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनावपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिने जानकारी पनि दिए । यही मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था भएकाले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन उनले मतदातालाई आह्वान गरे । फरक प्रसंगमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले..
तिलागुफा नगरपालिकाका दुई वडा देशकै पहिलो बालमैत्री शासन भएका वडा घोषणा
कालीकोट, १९ मंसिर । जिल्लामा तिलागुफा नगरपालिकाका वडा नं. २ र ४ लाई देशको पहिलो बालमैत्री शासन भएका वडा घोषणा गरिएको छ । जिल्लाको उत्तर–पूर्वमा पर्ने (साविकको राँचुली गाविस) तिलागुफा नगरपालिकामा सोमबार विशेष कार्यक्रमका बीच उक्त घोषणा गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति, कालीकोटका प्रमुख अनिपाल शाहीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा दुईवटा वडामा बालमैत्री शासनका लागि हुनुपर्ने ४१ वटा सूचक पूरा गरेकाले बालमैत्री..
काठमाडौँ महानगरपालिकामा विकास निर्माणका कामले गति लिँदै
काठमाडौँ, १९ मंसिर । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकामा विकासको कामले गति लिएको छ । जनप्रतिनिधि आएपछिको मुख्य प्राथमिकतामा परेको ‘क्लिन द सिटी’ (सफा शहर) अभियान अहिले तीव्ररुपमा अघि बढेको छ भने अन्य विकास निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । करिब एक हप्तादेखि बिहानको समयमा ब्रुमर (धुलो सोस्ने) को माध्यमबाट सडकको थुलो उठाएको कामपाले बेलुकीको समयमा भने जेट मेसिनबाट सडक पानीले पखालेर शहर सफा..
बैतडीमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालका कारण बालविवाह बढ्दो
बैतडी, १९ मंसिर । पछिल्लो समयमा बैतडीमा बालविवाहको मुख्य कारण सञ्चारका साधन तथा सामाजिक सञ्जाल बन्न थालेका छन् । फेसबुक, मोबाइललगायत सञ्चारका साधनले गर्दा बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या बढ्दै गएकोे किशोरी अभियन्ताहरुको भनाइ छ । आधारभूत तहदेखि नै किशोरकिशोरीको हातहातमा मोबाइल हुने भएकाले सञ्चारको दूरुपयोग गर्दा यो समस्या निम्तिएको अभियन्ताहरुले बताएका हुन् । बैतडीमा फोन र फेसबुकको माध्यमबाट सम्पर्क गरेर किशोरीहरु भाग्ने चलन बढिरहेको..
भिसा पारस्परिकता कायम गरी भिसा नीति समान बनाउन अमेरिकी दुतावसको प्रस्ताव
मंसिर १९, काठमाडौ । नेपालले अमेरिकी नागरिकका लागि अख्तियार गर्दै आएको भिसा निति परिवर्तन गर्न अमेरिकी दुतावसले आग्रह गरेको छ । अमेरिकी दिुतावसाले आफ्ना नागरिकप्रति अवलम्बन गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा) नीति समान नभएको भन्दै परिवर्तन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी नागरिकका लागि अवलम्बन गरिँदै आएको भिसा नीति परिवर्तन गरी आफूसँग एकरूपता कायम गर्न औपचारिक प्रस्ताव..
विराटनगर, १९ मंसिर । आगामी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आज बिहानदेखि नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका मोरङका सीमा नाका सिल गरिएको छ । यही बिहीबार हुने निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले भारतसँग जोडिएको मोरङको ४२ किलोमिटर सीमा नाकालाई सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी गराए । नेपाल र भारतमा हुने गरेको निर्वाचनमा दुवै सीमावर्ती..
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता आवश्यक : आयोग
काठमाडौँ, १८ मंसिर : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थालई प्रभावकारी तुल्याई निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले प्रेस विज्ञप्ति जारी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित वातावरणमा निर्वाचित हुन पाउने र जनप्रतिनिधि छान्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचनका क्रममा..
उम्मेदवार 'गगन थापा' माथि आक्रमणको वाम गठबन्धनद्वारा निन्दा
काठमाडौँ, १८ मंसिर : संयुक्त वाम गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ४ उम्मेदवार गगन थापामाथि आज भएको आक्रमणको भत्र्सना गरेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ चुनाव प्रचारप्रसार समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा र सहसंयोजक सुन्दर पुर्कुटीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी शान्तिपूर्ण मत माग्न गएका उम्मेदवारमाथि आक्रमण गरिनु कायरताको उपज भएको बताएका हुन् । सोही क्षेत्रका..
बम बिस्फोटमा घाइते भएका थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज, निर्वाचन कार्यक्रम जारी राख्न आग्रह
काठमाडौं, १८ मंसिर । काठमाडौं चपली हाइटमा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका कांग्रेस नेता तथा काठमाडौं–४ का कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापा शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । घरदैलो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट हुँदा थापासहित ११ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये दुई जनाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर, दुईजनाको गम्भिर र सातजनाको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् । घाइतेको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण..
झापा, १८ मंसिर । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज राति १२ बजेपछि मौन अवधि शुरु हुँदैछ । राजनीतिक दलहरु प्रचारप्रसारको अन्तिम दौडधुपमा ब्यस्त छन् । मौन अवधि शुरु हुनै लाग्दा झापा क्षेत्र नं ३ को चर्चा अझ बढी चुलिएको छ । क्षेत्र नं ३ मा काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला..
प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर देखाएर चुनाव जित्ने प्रयासमा ललितपुरका उम्मेदवार
ललितपुर, १८ मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरु आफ्ना प्रतिस्पर्धीका कमीकमजोरी ओकल्दै निर्वाचन जित्ने होडमा छन् । क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभातर्फ काँग्रेसबाट अर्थ राज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणा र वाम गठबन्धनबाट एमालेका नवराज सिलवाल उम्मेदवार छन् । राणा २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । राणाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी सिलवाललाई यस क्षेत्रलाई नचिनेको आरोप लगाउने गरेका छन् । “न..
सर्लाहीमा पूर्व सहकर्मीबीचको रोचक त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा
सर्लाही, १८ मंसिर । एक महिनाअघिसम्म एउटै पार्टीमा रही एउटै झण्डा बोकेर हिँड्ने तीन सहकर्मी अहिले छुट्टाछुट्टै पार्टीको झण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि सर्लाही क्षेत्र नं २ को निर्वाचन रोचक बनेको छ । सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवसँगै राजपाको महामन्त्री पद परित्याग गर्दै नेपाली काँग्रेसबाट जंगीलाल राय र राजपाको जिल्ला अध्यक्ष परित्याग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट..
दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि आज राति १२ बजेबाट मौनअवधि शुरु
काठमाडौँ, १८ मंसिर । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेपछि निर्वाचनको मौनअवधि शुरु हुने जनाएको छ । मौनअवधि शुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्ति, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, स्वतन्त्र उम्मेदवार, नागरिक समाज, आम मतदाता कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने आयोगका..
इन्ट्याग्रिटी आइडल-२०१७ छनोटमा पाँच प्रतिस्पर्धी, भोटिङ खुला
काठमाडौँ, १८ मंसिर । इन्ट्याग्रिटी आइडलको चौथो संस्करण ‘इन्ट्याग्रिटी आइडल नेपाल २०१७’ का उत्कृष्ट पाँचको नाम सार्वजनिक भएको छ । यस वर्षको उत्कृष्ट पाँचमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत कृषि प्रसार अधिकृत कृष्ण धिताल, वन विभाग बबरमहलमा सहायक वन अधिकृतका रुपमा कार्यरत सवनम पाठक, पञ्चदेव मावि कालीकोटका गणित शिक्षक सवराज बम, मोरङ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेल र सामान्य..
Results 9486: You are at page 304 of 317